Vula u-Espana (iSpeyin Open Golf Tournament)
Abaphumeleleyo kwintlanganiso yeYurophu Tour kunye neembambano kunye neentlanzi
Yintoni egameni? I-Open de Espana ibizwa ngokuthi "iSpeyin Open" eninzi yembali yayo. Ngokuqinisekileyo, i- Open de Espana iguqulela kwisiSpanish evulekile, ngoko kutheni ukholelwa ukuba ngaphandle? Igama lesiNgesi elisetyenziselwa ukuba ligama elisemthethweni lomqhubi; ukuqala ngo-1997, abaququzeleli be-tournament (kunye ne-European Tour) baqalisa ukusebenzisa iSpanish. Sisebenzisa "Vula de Espana" kunye "neSpanish Open" ngokungafaniyo ngezantsi, ngoko gcina ukhumbula ukuba i-Open de Espana ligama elisemthethweni.
I-Open de Espana yinxalenye yeTyelelo lwaseYurophu kwaye idlalwa entwasahlobo, ngo-Epreli okanye ekuqaleni kukaMeyi. Nangona kunjalo, le ntsebenzo ayidlalwanga ngo-2017; ubuyiselwe kwishedyuli ngo-2018.
Vula kwi-Espana 2018 Tournament
Ekhaya-intandokazi yelizwe uJon Rahm wenza amakhadi amane angama-68 okanye angcono ukunqoba umdlalo ngeentlobo ezimbini. Umgijimi nguPaul Dunne, omnye u-Spaniard, uNacho Elvira, wagqiba okwesithathu. U-Rahm wadonga 67 kwi-Round 4 ukugqiba ngo-20-phantsi kwe-268.
Indawo ye-Europe Tour tournament
IWebhsayithi YeeNgcaciso Zemidlalo (IsiSpanish kuphela)
Vula iiRekodi ze-Espana Tournament
Irekhodi lokufaka amanqaku angama-72 elingu-262, elibekwa nguMark James ngo-1988. Ngaloo nyaka unyaka wokubeka amanqaku angama-18 u-Wayne Riley-61. I-golfer eneyona nto inqobayo yiSpanish, Angel de la Torre, owaphumelela amahlanu ngama-1910 no-1920.
Amazwi Okuzonwabisa kunye ne-Trivia Nge-Open de Espana
I-Spanish Open yenye yeyona midlalo endala kakhulu kwilizwekazi laseYurophu, edlalwa kuqala ngo-1912. Iqhawe lokuqala liyi-French Arnaud Massey, ophumelele kwi-1907 eBritish Open .
I-Open de Espana yaba yinxalenye yeshedyuli yoTyelelo lwaseYurophu ngo-1972, unyaka wokuqala wobukho bobukho. Enyanisweni, i-Open de Espana yayingumqhubi wokuqala edlalwa kwixesha lokuqala loTyelelo lwaseYurophu. Okwenza u-Antonio Garrido kungekhona kuphela i-Spanish Open Open iqhawe lika-1972, kodwa naye ungumqhubi wokuqala kwiimbali ze-European Tour.
Ukuphumelela kwintambo yokuqala yaseYurophu yasePraraig Harrington kunye nokuphumelela kokuqala kuyo nayiphi na inkalo enkulu yokutyelela kwakuyi-Open Spanish.
I-Open Spanish yase-2013 iye yafika kwindawo yokufa ngokukhawuleza eyayihlala emingxeni ayisithoba ngaphambi kokuba uRafael Jacquelin aphumelele. Oku kufana nerekhodi yeTurophu yaseYurophu yexesha elide kakhulu lokufa ngokukhawuleza, eliye lasekwa kwi- Open Dutch , ngo-1989, apho u- Jose Maria Olazabal wayedinga imingxuma eyisi-9 eyongezelelweyo.
USpanish u-Angel de la Torre watyhola amahlanu ngokusukela ngo-1916 ukuya ku-1925, irekhodi lomncintiswano lwamaninzi amanqoba. UDe la Torre wanqoba kathathu ukusuka ngo-1916-18, ixesha elilodwa kuphela i-golfer inqobile iSpeyin Open iminyaka emithathu iqonde.
Abanye abathathu abagadi begalufu bawubambe i-Open de Espana kathathu nganye: Arnaud Massy, ​​Joaquin Bernardino, uGabriel Gonzalez, uMarcelino Morcillo, uMariano Provencio, uMax Faulkner, uSebastian Miguel noSeve Ballesteros .
Kwiminyaka yomqhudelwano njengenxalenye yeShedyuli yoTyelelo lwaseYurophu, kuphela uNeil Coles (1973) uzuze ucingo-wire.
Ukunqoba kukaMiguel Angel Jimenez ngo-2014 kwakubalulekile kuba wayeneminyaka engama-50 ubudala. Wandisa iRekodi yeYurophu yokuTyelela njengomqhubi wendwendwe endala, kunye ne-golfer yokuqala ye-50 okanye ngaphezulu. Ngubani irekhodi lomncintiswano eyenziwa nguJimenez njengeSpeyin Open winner? UArnold Palmer wayeneminyaka engama-45, iintsuku eziyi-221 ubudala xa ephumelele ngo-1975.
Abaphumeleleyo kwi-Open de Espana Tournament
Ukulandela uluhlu lwabadlali abaphumeleleyo, abathandana nabokuqala ngo-1912. Amagama odlulileyo weemidlalo atywelwa (p-won playoff; a-amateur).
2018 - UJon Rahm, 268
2017 - Ayidlala
2015 - UJames Morrison, 278
2014-p-Miguel Angel Jimenez, 284
2013 - URafael Jacquelin-p, 283
2012 - uFrancesco Molinari, 280
2011 - uTomas Aiken, 278
2008-p-UPeter Lawrie, 273
2007 - uCharl Schwartzel, 272
Andalucía Vula de Espana Valle Romano
2006-p-Niclas Fasth, 270
Jazztel Vula de Espana en Andalucia
Canarias Vula u-Espana
2004 - ongumKristu Cevaer, 271
2003-p-Kenneth Ferrie, 266
2002 - USergio Garcia, 275
Via Digital Open of Espana
2001 - URobert Karlsson, 277
Peugeot Vula ka Espana
2000 - UBrian Davis, 274
1999 - uJarmo Sandelin, 267
1998 - uTomas Bjorn, 267
1994 - uColin Montgomerie , 277
Ngo-1993 - uJoakim Haeggman, 275
Ngo-1992 - u-Andrew Sherborne, 271
Ngo-1991-p-Eduardo Romero, 275
1990 - uRogger Davis, 277
Ngo-1989 - uBernhard Langer , 281
1988 - UMark James, 262
1987 - UNick Faldo , 286
Ngowe-1986 - Howard Clark, 272
1984 - UBernhard Langer, 275
1983 - uEamonn Darcy, 277
1982 - USam Torrance, 273
1981 - USeve Ballesteros, 273
1980 - uEddie Polland, 276
1979 - UDale Hayes, 278
Ngo-1978 - uBrian Barnes, 276
Ngowe-1977 - uBernard Gallacher, 277
1976 - uEddie Polland, 282
Ngo-1975 - uArnold Palmer, 283
1974 - UJerry Heard, 279
Ngo-1973 - uNeil Coles, 282
Ngo-1972 - u-Antonio Garrido, 293
Ngo-1971 - uDale Hayes, 275
1969 - UJean Garaialde, 283
1968 - UBob Shaw, 286
1967 - USebastian Miguel, 265
1966 - URoberto De Vicenzo, 279
1965 - Ayidlala
Ngo-1964 - uAngel Miguel, 272
1963 - uRamon Sota, 287
1962 - Ayidlala
1960 - USebastian Miguel, 286
1959 - UPeter Thomson , 286
Ngo-1958 - uPeter Alliss , 268
Ngo-1957 - uMax Faulkner, 283
Ngo-1956 - uPeter Alliss, 285
1955 - i-Conde de Lamaze, 271
1954 - USebastian Miguel, 268
1953 - uMax Faulkner, 271
Ngo-1952 - uMax Faulkner, 275
1951 - UMariano Provencio, 281
1950 - uAntonio Cerda
1949 - UMarcelino Morcillo, 280
1948 - UMarcelino Morcillo, 268
1947 - u-Mario Gonzalez, 277
1946 - UMarcelino Morcillo, 281
1945 - uCarlos Celles, 274
1944 - uNicasio Sagardia
1943 - UMariano Provencio, 286
1942 - UGabriel Gonzalez, 264
1935 - uTomas Cayarga
1933 - uGabriel Gonzalez
1932 - uGabriel Gonzalez
1931 - Ayidlala
1929 - u-Eugene Lafitte
1928 - uArnaud Massy
1927 - uArnaud Massy
1924 - Ayidlala
1922 - Ayidlala
1921 - u-Eugene Lafitte
1920 - Ayidlala
1918 - Ayidlala
1913-15 - Ayidlala
Abaphumeleli beMidlalo ye-Masters Par-3, iiRekhodi kunye neNyaniso
Ukusebenzisa iSpeyin Noun Vez
'Jingle Bells' ngesiSpanish
Abantu kwi-Life of Hercules (iHeracles / iHerakles)
Ukuxubusha kweeLwimi (LSM)
Izifundo zezilwanyana kunye neengcamango zeProjekthi zeSikolo
Yintoni Omele Uyibuze Ngethuba leNgcaciso Yakho Yonyango